Qondisa intando yeningi isinqamuleli kusuka ekuvimbekeni nasekuvuseleleni umnotho: Martin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-15 May 2020	• 24 Amazwana
Intando yeningi eqondile yisixazululo esisabekayo lapho uhulumeni waseDashi egwaze izwe lethu. Kuyindlela yentando yeningi lapho abantu bekhetha ngqo abamele babo ngokuvota online (kuvikelwe). Abantu abanokuhlelwa kabusha nobuholi bavotelwa. Umuntu onamavoti amaningi uwina ophethe ungqongqoshe. Kwenzeka okufanayo nakuNdunankulu.
Imithetho kumele ibuyekezwe futhi yethulwe kubantu ngamagama asobala elula ukuze ivunyelwe noma ivunyelwe. Imithetho inikezwa usuku lokuphelelwa yisikhathi futhi ingavotelwa ngaphandle noma ivuselelwe ngokuzenzakalelayo lapho lelo suku liphela. Kusala umthetho omuhle. Kuvele umthetho omubi.
Ungayakha intando yeningi ngqo ngenkathi uhulumeni okhona esekhona. Kuyindlela ehlakaniphile yokuphikisa engaba ukhonkolo ngokushesha. Inguquko ethule futhi esheshayo. Awulindi ukhetho, kepha hlela ukhetho lwakho online ngqo.
Kungaba ukhonkolo ngokushesha, ngoba ugcina izinhlaka zomphakathi zikhona, kepha ungene esikhundleni abaholi ngokusebenzisa ukuvota online. Amaphaphu omqhele athathelwa indawo ngabaphathi abavela kubantu.
Izinhlelo zokuvota ezinikezela ngezokuphepha futhi ezingalawula ukhetho lwabangenelwa zikhona. Kungakuhle ukwenza lokhu nge-blockchain noma ngesixhumanisi kwi-DigiD yakho, kepha ngenxa yokuthi akufanele silindele ukuthi uhulumeni osebenzayo abambisane, singakwazi ukuhlela lokhu ngokwethu. I-FVVD isivele ihlinzeka ngengxenyekazi yalokhu (www.fvvd.nl).
Le ncwadi engezansi iyichaza ngokuningiliziwe futhi iyincwadi eluciko ongayithumela ngqo kubangani bakho noma kubantu obajwayele:
Kafushane nje ngohulumeni wamanje kanye “nokuvalwa okukhaliphile” esikhulume ngakho.
Kancane kancane, endaweni yami, abantu abaningi bayaqala ukubona ukuthi uhulumeni ufuna ukuguqula umphakathi uwonke. Lokho “kukhiye okukhaliphile” kuzoguqulwa kancane kancane kube yinto ehlala njalo, lapho kufanele uthenge kabusha inkululeko yakho. Okujwayelekile okusha kuba yimitha nengxenye yomphakathi futhi kufanele uzikhokhele ngokwakho. Ngikhathele yilokho.
Lalelani, izinkampani manje sezingaqasha abaluleki abizayo ukuthola izeluleko zokuthi bangamisa kanjani ibhizinisi labo ezinyaweni eziyisithupha. Ubheja kukhona ithegi yentengo enamathiselwe kulokho; ithegi yentengo yenkampani (ngoba izodinga ukuthola imvume esemthethweni yezinyathelo eziyi-1,5) nethegi yentengo yekhasimende (ngoba umuntu kuzodingeka akhweze lokho kubopha okungamamitha elilodwa nesigamu kanye nokwehla kwemali engenayo).
Kungenzeka ukuthi umuthi wokugomela oluzayo we-covid-19 umane ube ophoqelekile. Ucabangani ngalokho?
Ngabe ucabangani ... Ngaphandle kombuzo wokuthi umuthi wokugoma uhlolwe ngokuphelele noma cha, futhi ngokulinganayo ngaphandle kombuzo wokuthi sifuna noma cha yini lelo mishini elilodwa nesigamu semiphakathi. Ngicabanga ukuthi uRutte uyaxaka futhi empeleni abalaleli abantu ababhikishayo eThe Hague.
Angazi ukuthi ucabangani ngakho, kepha ubuchwepheshe buzosetshenziswa ukuqapha zonke lezo zinyathelo. Lokho ubuchwepheshe nedatha enkulu kuzofika nje, ngoba kunezinkampani eziningi kakhulu ezingathola i-nibble ehehayo futhi. Noma uyibona ngendlela ehlukile? Ngicabanga ukuthi iningi labantu selivele lisebenzela izinkampani ezinkulu ezihlinzeka ngezixazululo ze-ICT noma izinhlaka zikahulumeni eziqinisekisa ukuthi bangaqhubeka nokukhokhela ikhaya labo futhi banakekele imindeni yabo. Labo bantu bangabona ukuthi kukhona okungahambi kahle, kepha uma kukhulunywa ngokuthi kufanele bakhethe, abantu abaningi bazikhethela eyabo indlu nengadi.
Mina nawe sazi ngempela ukuthi lo mphakathi omusha uzobukeka kanjani. Abezindaba nezwe bayaqhubeka nokukholelwa ukuthi ukuthengisa kuyadingeka futhi nendlela eyethulwa ngayo yinyathelo ngesinyathelo, ukuze izixuku ziqhubeke nokukholelwa ukuthi kuyadingeka ngempela ukuqukethe leli gciwane le-corona. Akungijabulisi.
Ingabe nguwe owasho lokho? Ukuthi inqubo izoqhubeka ngokunyakaza kwamagagasi kusuka 'ekuqiniseni ibhande' kuya 'ekumeni i-reins entwasahlobo' bese kuza igagasi elilandelayo. Ngemuva kwenkathi yokujwayela imitha eyodwa nesigamu nendawo encane yokusebenzisa, abezindaba, ochwepheshe (ukukhiqizwa kwezibalo ze-RIVM) nosopolitiki bazosikhombisa ukuvuselelwa kwegciwane le-corona, ngemuva kwalokho kwethulwa ingxenye elandelayo yengxenye iphakethe lizokwamukelwa ngabantu.
Angikhumbuli uma usho njalo, kodwa abantu abaningi ngokwengeziwe bathola imininingwane yokuthi sidlalwa kanjani (ngaphandle kwazo zonke izindaba ezingekhohlakele). Singathola okuningi ngokuthi imijovo yokugoma iyingozi kangakanani, kanjani ilungelo lobunikazi be-Microsoft elifuna ukusinikeza isitifiketi sokugoma edijithali, ukuthi uBill Gates ufaka kanjani embonini yezindaba nokugoma, ukuthi izinhlelo zokusebenza zingasetshenziswa kanjani ukuqapha thina. Ngicabanga ukuthi ngokushesha sincishiselwa ohlelweni lwedijithali lokulawula ngokuphelele. Ngicabanga ukuthi ulwazi lubaluleke kakhulu, ngoba uma ungazi ukuthi iyiphi ingozi ekujaha, awugxili eceleni ngesikhathi. Noma kunjalo, kufanele kube nesinyathelo esilandelayo. Kufanele size nezisombululo.
Ngicabanga ukuthi uma mina nawe singenzi lutho, sizothuthela emphakathini lapho kungekho mali eyengeziwe, umphakathi lapho izinhlelo zokusebenza, amakhamera nedatha enkulu azi kahle ukuthi sikuphi noma sinalo yini izinga lokushisa elifanele (akukho covid-19) nokuthi sonke sixhumana nobani. Isinyathelo esilandelayo ukuxhumanisa yonke le datha nohlobo lohlelo lwamanqaku. Angikakulindeli lokho, angithi? Ngokuthola noma ngaphandle kwenqaku elanele, ungahle noma ungaphumi ngaphandle, ngesitimela noma ngendiza noma okunjalo. Lokho kuzoba ngumhlanya! Isixhumanisi sayo yonke leyo mininingwane kumaki wedijithali kanye nesixhumanisi sobhalansi lwebhange lakho ledijithali kumnandi kakhulu. Uhlobo lwejele elivulekile.
Ngicabanga ukuthi senziwa kuwebhu, kanti iChina ihlinzeka ngesibonelo sokuthi njengesifundazwe ungaphoqa kanjani abantu ukuthi bayilandele. Angifuni ukuhlala eChina. I-China ibuye ikhombise ukuthi umuntu omele ophikisayo ushiywe kanjani nje ngaphandle. Lowo umphumela wokuzenzakalelayo wohlelo olunjalo. Noma uyibona ngendlela ehlukile? Ekugcineni, izindimbane zizokhothama futhi, ngokwengxenye ngoba abaningi emphakathini uqobo basebenzela izingxenye 'zohlelo'. Uma unomsebenzi ku-IT futhi uhlinzeka ngesoftware yedatha noma unikezela ngezinhlelo zekhamera, uma usebenza njengesikhulu esiphenya noma njengamaphoyisa, usayikhetha imali oyitholayo. Injalo indlela ehamba ngayo.
Muva nje othile uthe: "Ngemuva kwalokho ngilahla i-smartphone yami ukuze ngiphume ohlelweni". Kepha sisaya esikhathini lapho ukubamba iqhaza komphakathi kuba yinto engenakwenzeka ngaphandle kwe-digiD noma ngaphandle kwe-eHerkenning (yezinkampani). Kunjalo vele. Kuzokwenzeka okufanayo nangobuchwepheshe obusha be-corona. Uma ulahle i-smartphone yakho, ngeke usakwazi ukungena esitolo. Ngemuva kwalokho uyi-spool nje.
Ngabe ucabanga ukuthi kuzofika kulokho? Ngicabanga kanjalo ... Futhi-ke ungasinda kuphela uma unengadi yakho eyabelwe, kepha lapho-ke futhi kuzofanela uthole imbewu yakho kuyo, ngoba lokho kuzanelisa nakho kungenzeka kungavunyelwa esikhathini eside. Hhayi, angazi ngawe, kepha anginaso isikhathi salokho futhi angizizwa unjalo.
Ngicabanga ukuthi isinyathelo esilandelayo kuzoba ukuthi akusafanele ube sezindaweni zomphakathi uma ungazange uthole umuthi wokugoma. Futhi leyo "datha enkulu" nayo izodlala indima kulokhu. Uma uhlelo lokusebenza olunjalo lisho kamuva ukuthi usuthole umuthi wokugoma, isango lokungena esitolo liyokungenisa; ngaphandle kwalokho. Esigabeni sokugcina, uhlelo lokusebenza elinjalo cishe lizothathelwa indawo yisici esidijithali esixhunyaniswe nomzimba wakho noma okuthile. Angazi, uyezwa ukuthi iMicrosoft isebenza kulolo lungelo elilodwa lobunikazi noma okuthile (akulona uzungu, ngifunde engosini ye-patent yakwaGoogle). Futhi kuzoba kuphela uma bexhumanisa nebhalansi yakho yasebhange kukho konke lokhu. Brrrr .. Maduze nje ngeke kube nokuphunyuka ngaphandle kokuthi ukhetha ukuhlala 'endle', kepha ake ..
Singamemeza esikufunayo; singakhala sithi asikufuni konke, kepha kufana nokukhala ogwadule. Iningi lincike 'ohlelweni'. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokucabanga ngalokhu: Uma ungakwazi ukushaya i-'m, joyina 'em.
Ngicabanga ukuthi kumele siqhamuke nezixazululo zikakhonkolo ezingabuye zitholwe yilabo abasebenzela 'uhlelo'. Kufanele size nezisombululo ezikhonkolo nezisebenzayo eziqinisekisa ukuthi abantu abalahlekelwa izinto ezithile, kepha banakho. Manje sesithembele ngokuphelele ezinqumweni ezibekiwe ezivela phezulu. Uhlelo lwezepolitiki olukhona njengamanje lusiphoqa ukuthi samukele lezo zinqumo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokuzibandakanya. Ngicabanga ukuthi lokho kungenziwa ngokuhlukile. Lokho kudinga ukuguquka manje. Kuyangicindezela ngempela.
Ngifunde ngethuba lokuguqula izinto kalula nobuchwepheshe obufanayo kulezi zinsuku, ngaphandle kwalokhu ngiguqule wonke umphakathi phansi. Akudingi ukuvukelwa okukhulu noma ukuvukela okukhulu. Wonke umuntu angaqhubeka nokwenza abakwenzayo. Ngifisa ukwazi ukuthi ucabangani ngalokho, ngoba ngaso sonke isikhathi ngiyawazisa umbono wakho.
Ukuphela kwento eguqukayo isakhiwo sokwenza izinqumo. ONgqongqoshe nezikhulu manje esezibikela umqhele futhi zisebenza ngemithetho ngaphandle kwemvume yabantu masinyane kumele zibikele abantu. ONgqongqoshe kufanele bashintshwe abamele abakhethwe ngabantu ngqo (ababamele abantu ngempela hhayi umqhele). Lokhu bakubiza ngentando yeningi eqondile. Lokho kukhushulwa ngisho no-Elon Musk (walezo zimoto zakwaTesla). Akuyena umfana oyisiphukuphuku…
Uma lokho kungenzeka ngentando yeningi eqondile futhi uma kungeniswa ngokushesha, ngicabanga ukuthi kufanele siqale ukukwenza lokho futhi sikukhuthaze. Kwentando yeningi eqondile, abantu bakhetha abamele abantu kwi-inthanethi. Ngakho-ke ungaba yilowo nalowo mgadli wakho noma unikeze abantu ukhetho bese uhlelo lokuvota luqinisekisa ukukhethwa nokukhula ngokusekelwa. Kancane nezinhlelo zokuvota njengeHolland Got Talent nezinye izinhlelo zeTV. Ubuchwepheshe bukhona. Engikuqondayo ukuthi kungenzeka ngokushesha.
Ngakho-ke abamele abakhethwe ngokuqondile kufanele benze lula imithetho bese beyethula kubantu ukuze bavunyelwe noma babuyekezwe. Kusuka ezinkulungwaneni zemithetho, ukucaciseleka, kusuka ngobuningi kuye kwikhwalithi. Ukubamba iqhaza komphakathi ngokuqondile. Ngicabanga ukuthi kuhlakaniphe kakhulu.
Singalinda kuze kube yilapho imithetho yokugoma evunyelwe isivumela ukuthi sikhethe ukuthatha umuthi wokugoma noma siye ejele ledijithali noma singabamba umzuzu. Ngicabanga ukuthi kufanele sisebenzise lesi simo esinzima ukwenza ushintsho lwenzeke. Shintsha indlela esifuna ngayo! Intando yeningi eqondile ingathatha isikhundla sesakhiwo samandla esikhona ngohlelo lokuvota oluku-inthanethi ezinyangeni ezimbalwa. Well: Ekugcineni okuthile ngokhonkolo esikhundleni sayo yonke leyo mibono enoboya kuyo yonke i-intanethi.
Ngifuna ngempela ukwazi ukuthi ucabangani ngakho! Ngicabanga ukuthi manje isikhathi sokusekela lokhu. Ake sixoxe ngalokho. Singayakha njengoba sonke senze i-Facebook ibe nkulu. Wenza lokho ngokwabelana ... ekhombisa abantu abaseduze kwakho. Kungakho ngicabange ukuthi ngizokuxhumana nawe.
Bheka lapha, kuchazwa kahle lapho: https://www.fvvd.nl/ futhi ungasayina ngokushesha isicelo esibonisa ukuthi empeleni sifuna ukukwenza lokhu ngokubambisana. Lokho kufanele kuhambe ngegciwane kuphela uma ungibuza.
Yebo, ngiyayizwa kuwe.
(PS mhlawumbe umbono: thumela le imeyili kwabanye abangane bethu)
Kunemibuzo eminingi mayelana nokuthi uhlelo olunjalo lwezepolitiki luzosebenza kanjani, kepha umqondo:
ukuthi ingaqalwa ngokushesha
ukuthi luhlobo olwedlula zonke lwentando yeningi
ukuthi ungenza uhlelo lwezezimali luqine futhi
Lokhu kokugcina kungenziwa, ngokwesibonelo, ngokungenisa i-guilder yedijithali (futhi kungenzeka). Leso sigungu simbozwa yiso leso ukwehla kwamanje kwemali ama-counter. Lokho kuxhuma kwakha "igolide" elisha. Lokho kungaba yigolide lezinto ezibonakalayo noma kungaba bitcoin. Ungakha masisha imali yedijithali kanye nesixhumanisi nge-bitcoin (njengoba “standard standard”) isheshe isungulwe. Lokhu okulandelayo kusebenza kuyo yonke into: abantu bayazikhetha.
Iningi linquma! Futhi yilobu ubuhle bentando yeningi eqondile. Intando yeningi eqondile ibingasoze yenzeka ngaphambili, ngoba izomane ithathe isikhathi esiningi. Ngobuchwepheshe banamuhla, unganika abantu okushoyo ngokushesha. Ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza nangokucindezela inkinobho, uvotela umuntu ozongena ukhetho bese ucindezela inkinobho eyodwa evuma noma unqabe iziphakamiso.
"Yebo, kepha lokho akwenzeki, imithetho iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho futhi kunemithetho eminingi kakhulu yalokho!Ngqo futhi yilokho kanye okudingeka kuguqulwe. Ngakho-ke, abaholi abasha kumele bakwazi ukwenza lula, baxhumane kahle futhi bakholise abantu. Iningi lihlala linquma.
Vumela ukuthi icwile, icabange ngakho, kepha ungayithatheli isikhathi eside. Sidinga ukuphuma esimweni esikhona manje futhi sidinga ukukhipha abantu abasibusayo manje ngaphandle kwesakhiwo. Funda kabanzi www.fvvd.nl futhi ubuze imibuzo yakho ngaphansi 'kombuzo nezimpendulo'.
"..Uma ukhokha lokhu izingane zakho zizolandela"
izithombe zomthombo: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Ingabe kufanele uthathe noma wenqabele umuthi wokugomela i-Covid-19 uma uba yimpoqo? Okufanele ngikwenze?
Amathegi: ukunyakaza, intando yeningi, ngqo, ngqo, afakiwe, Forum, i-fvvd. iphathi, i-lockdown, umphakathi, izikhonzi, online, platform, i-revolution, uvote
15 May 2020 ku-15: 27
I-ANP: I -olloll: IVVD ikhula ibe izihlalo ezingama-43 ngokusebenzisa indlela ye-corona
Abavoti bayayithokozela kakhulu indlela kahulumeni esebenza ngayo, okuyinto exhasa iqembu elibumbene elikhulu kunazo zonke, iVVD, ngokusho kocwaningo lwakamuva olwenziwe yi-I&O Research. Iqembu lenkululeko lingathembela ezihlalweni ezingama-43, kuyilapho onke amanye amaqembu ebambeka ngaphansi kwezihlalo eziyi-16.
15 May 2020 ku-15: 29
I-ANP John de Mol… ivoti noma inkulumo-ze ethembekile? Isikhathi esithe xaxa sokufakazela okuphambene.
15 May 2020 ku-15: 42
lonke uhlelo lokuvota alunakwethenjwa uma bethi izihlalo ezingama-43 zicabanga nje ukuthi ziyakwazi ukuthola inani lezihlalo ezingama-43. Izakhamizi eziningi zaseMadurodam zisakholelwa enqubweni yokuvota kanye nebhokisi lokuvota.
Well angikutshele emthonjeni othembekile ukuthi kunenkohliso yebhokisi lokuvota nokuthi alikho elingcono kune republic banana eliphakathi nendawo. I-ANP nayo iyabandakanyeka ekubaleni amavoti
"Omasipala badlulisela isibalo esiphelele sokubalwa okusheshayo kwi-ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Ngokususelwa kulezi zibalo zokuvota, abakwaNOS bazokwethula imiphumela yokuqala kusihlwa sosuku lokhetho. "
"Izikhulu zikaMasipala zengeza imiphumela esiteshini sokuvota. Lokhu bakwenza ngesisekelo semibiko esemthethweni yeziteshi zokuvota. Imiphumela itholakala ngosizo lwethuluzi lokubala (iningi lamaSoftware Elections), esigabeni seqembu kanye nasezingeni leqembu. ”
15 May 2020 ku-15: 55
UJoseph Stalin - 'Labo abavotayo abanqumi lutho. Labo ababala ivoti banquma konke. '
15 May 2020 ku-16: 07
Ngicabanga ukuthi uMol usengumngani noma okungenani ungumlingani webhizinisi likaBerlusconi. Ama-Freemasons phakathi kwabo, bebonke bazakhela ikusasa eliqhakazile bona nabazakwabo, hhayi ubuntu.
16 May 2020 ku-09: 10
I-idd it benne kabbalists, iBergusconi yaziwa njengelungu lesakhiwo sokuhlala esaziwayo se-PII. Indawo efanayo ebibandakanyeka ekuhleleni ukusebenza kweGladio e-Italiya eyabulala inqwaba yabantu ibuswa yi “Red Brigades”. Bahlala bazi ukuthi bangakwazi kanjani ukufaka kahle futhi bathengise abasolwa abajwayelekile.
16 May 2020 ku-13: 51
IFreemasonry Iholele Inhlangano YaseNtshonalanga
Iningi labenzi bezinqumo ababalulekile baseNtshonalanga, osopolitiki, abezomnotho, kanye nezikhulu zamasosha bangamalungu omphakathi oyimfihlo noma bayathonywa futhi bavame ukuphathwa yilawo malungu… Lesi yisakhiwo esifanayo sobuSathane esithola kwezinye izindawo zokuhlala zeFreemasonry, njengePII Indawo yokuhlala ibandakanyeka kwiCalvi Affair e-Italy ekuqaleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa - izimfihlo, ukuphinda kabili, ukusetshenziswa kwethonya elingafanele, ukungena ezindlini, inkohlakalo yezikhulu futhi, lapho kunesidingo khona, kubonakala sengathi, nokubulawa kwabantu.
22 May 2020 ku-14: 43
Ukhetho?! Vele uyilahle, uTrollongren usebuye nokunambitha futhi
IKhabinet (vd Koning): ukuhlehliswa kokhetho ngenxa yama-coronavirus angeke kukhishwe
"Ukuvota ngencwadi nakho 'kungabonakala emcabangweni', kusho u-Ollongren." hahahaha
By the way, funda umbiko weNkantolo Yabacwaningi mabhuku ngemizi engenayo igesi, ukuthi uTrollongren umi kanjani? Kungabiza okuthile… imali eyanele yentela yaseMadurodam idonswa ngayo
Esimweni sayo samanje, i-Natural gesi-Free Neighborhoods Program ayifaki sandla ngokwanele ezinhlosweni zikaNgqongqoshe Wezangaphakathi Nezindaba ZoMbuso (i-BZK) zokwenza imiphakathi engenagasi igesi yemvelo. Ungqongqoshe Wezangaphakathi kanye Nobudlelwano boMbuso ukhulise okulindelekile okungenakufezeka.
22 May 2020 ku-17: 16
ngitshele .. kuyaqhubeka nje. Ngaphandle kwegesi, akufanele yini lokho kube yigesi ehlekisayo?
UNgqongqoshe u-Ollongren uphenya ibhokisi lokuvota elilodwa nesigamu
Umqedazwe we-COVID-19 okwamanje akusona isizathu sokuhluleka ukuhlela noma sokuhlehlisa ukhetho lwamalunga ePhalamende lwango-2021, kodwa kungenza ukuthi ibhokisi lokuvota libukeke lihlukile. UNgqongqoshe uKajsa Ollongren weZangaphakathi wabhala encwadini eya ePhalamende ngoLwesihlanu ukuthi uyaphenya ngalokhu. Lokhu akusebenzi nje kuphela okhethweni olwenziwe kwiNdlu Yabamele, kepha nakukhetho lomkhandlu osesiqhingi iSt Eustatius kanye namabhokisi athile okuvota kamasipala azokwenzeka engxenyeni yesibili yonyaka we-2020.
UMnyango Wezangaphakathi uzofaka isithombe sokuthi ukhetho kufanele lubukeke kanjani uma ibhokisi lokuvota lidinga ukulungiswa. Lokhu kungaba ngokwesibonelo ukwakhiwa kabusha kweziteshi zokuvota. UNgqongqoshe u-Ollongren ubalule nokuthi kungenzeka ukuthi abantu bavote ngezincwadi uma ingekho enye indlela. Kulokhu unezela ukuthi izimfihlo nenkululeko yokuvota ngeke zivikelwe kanye nokuvota okujwayelekile endaweni.
15 May 2020 ku-19: 08
Uma ufuna ukuba ngumholi weqembu elikhulu, wenza lokho ngaphandle kwenzalo hhayi lwemali (yedijithali). Lapho nje imali isizungeza, izinto zihamba kabi. Ohulumeni bamanje benza sengathi abaholi imali eningi, kepha ngomnyango ongemuva kuyindaba ehluke ngokuphelele.
Ukunikeza abantu imali yamahhala ngeke kusize noma ikuphi, imali inika amandla lapho isikhathi sisetshenziswa khona. Njengabalandeli abasebancane bazokhala ngokuningi.
Yonke into kule ndawo yonke ikhula mahhala futhi imithetho yemvelo iyefana kuwo wonke umuntu. Iningi lesintu kanye nabaholi balo basebenzise le mithetho ngemithetho ye-ego.
Wonke umuntu kulomhlaba unelungelo lokuba nezakhe futhi ahlakulele indawo yomhlaba. Kuzoba nokudla okuningi kakhulu ukuthi kunokuningi futhi akekho oyolamba.
Awekho amahlathi okudingeka ukuthi anqunywe ukuze kukhule umnotho. Uma ufuna ukuya kwelinye izwe, wenza isivumelwano sokushintshana isikhashana. Ukukhula komnotho kuyinkunzi, ukukhula komnotho kungobugovu.
Kuyintando yawo wonke umuntu ukuthi lokhu kuqhubeke ukusebenza ngoba siyazi ukuthi kuzokwenzekani uma sikulahla.
O shit lokhu kwenzeke ngaphambi 😉
15 May 2020 ku-20: 10
Ngicabanga ukuthi lo umqondo omuhle kakhulu. Sicela uweseke ngenhliziyo yonke.
Awungeke futhi usebenzise lolu hlelo lokuqondisa intando yeningi ngamareferendamu?
Futhi ungaqiniseka kanjani ukuthi lolu hlelo luthembekile futhi alukhohlisiwe?
Angihambisani nemali yedijithali noma eminye imininingwane yomphakathi ejwayelekile.
Ngabe lolu hlelo lungase futhi lusetshenziswe ngendlela "enhle kakhulu"?
16 May 2020 ku-21: 57
Konke ukubukwa okuhle nokubalulekile kumazwana. Kodwa-ke, ingabe kukhona ukusabela noma incwadi njengoba ibhaliwe kule ndatshana futhi ingabe le ncwadi isivele ikopishiwe futhi idluliselwa kwabanye? Uma unazo ezinye iziphakamiso noma maqondana nencwadi noma ukufinyelela eqenjini eliqondiwe, unganqikazi ukuxoxa. Lokhu kungumsebenzi omncane, futhi njengoba leli gciwane lisakazeka kakhulu, lo mlayezo ungasakazeka kakhulu. Izimpendulo eziningi kwamanye (amasayithi we-oposition alawulwayo) zibonisa ukuthi imizwa ye-gut yabaningi ifuna ushintsho. Ngakho-ke manje sekuyisikhathi sokuthwebula leli qembu kwezinye iziteshi. Ukukopisha incwadi bese uyihambisa ngombuzo ukuze uyihlangabeze ngenye indlela. Ngendlela efanayo, “elinye iphephandaba” lasatshalaliswa ngoSuku lweNkululeko, olwaluhlobo olushicilelwe. Ngiyethemba ngeqiniso ukuthi abantu abangama-930 abasayine lesi sicelo nabo bakopishe le ncwadi bayisabalalisa abanye.
16 May 2020 ku-23: 06
Vuma, manje sekuyisikhathi impela sokuthatha isenzo futhi usikhuthaze ngenkuthalo. Asiphumi kulokhu ngokuphendula nje izindatshana, kodwa ngokukhuthaza abantu ngokweqiniso.
16 May 2020 ku-22: 11
Vele ubeke lapha, uhleli nomphumela we-chimeric yakho, kepha ubuvele ukuazile lokho. Bona ngezansi.
Coronavirus Vaccine Patent https://patents.justia.com/patent/10130701 ukuze i-Attenuated Coronavirus isetshenziswe njenge-Vaccine. I-Patera Protein Patent https://patents.justia.com/patent/8828407 Inhloko yeChimera Lion, umzimba weMbuzi, umsila weDrako “She-Goat” ngokwezwi nezwi isho ukuthi “Isikhathi Sobusika” aka Capricornus the Goordanan Goat of Winter; iChimera isilwane esibulalayo esidalwe kwezinye izilwane, ngokunembile ukuthi injani i-Vaccine.
Ngaphezu kwalokho, iGileyadi iyinto futhi ebhalwe ngemibhalo yesiHeberu. Kubukeka sengathi kusho okulandelayo.
IGileyadi (ingumsunguli we-remdivivir, umgomo wokugomela uTrump ufuna izigidi ezingama-300 zomgomo wokulethwa ngamasosha. Ngakho-ke usesikhungweni, ngoba akukho lutho oluhloliwe kunoma yini, futhi ngokuqinisekile alwenziwanga ngezinhloso ezinhle. Bona igama lenkampani elihunyushwe nguGoogle futhi kubhekiswe ngezansi.
Inqwaba yokufakazwa kukadaliya igama elilingana neGaleed ngesiHeberu. Kokubili okumaka isimo sokuhlangana phakathi kukaJacob noLabani. UGen 31:47 (hhayi ukweluleka abantu ngebhayibheli, kodwa ukuhumusha)
UPapa uFrancis Encyclical Laudato Si (iphepha lokufundisa) Izingcingo zokubulala abantu abayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha;
Ongaxutshiwe ubanjwe izandla ngokuhlangana ubuso nobuso nozungu aze angakholelwa ukuthi kuyabonakala. ISodoma, iPhedophile, i-33 degree Freemason. J Edgar Hoover, umqondisi we-FBI.
I-Alter kulapho bafuna ukukuthatha khona, hhayi ukushada.
Ngakho-ke kulula ukubona ukuthi babi kangakanani labo bantu, uma ungababiza lokho.
18 May 2020 ku-22: 57
Njengoba nje i- “De Andere Kranr” ishicilelwe futhi yasatshalaliswa njengekhophi ephrintiwe eNetherlands, kuye kwashicilelwa iphephandaba laseJalimane lapho kungaphikiswa khona ukuthi abaphikisi ngezinyathelo zamanje.
Ukusabalalisa lolu hlobo lwezindaba ngokuqinisekile kuzosiza abantu abaningi ukuba babhekane nengcindezi yontanga encane lapho bebona imizwa yabo yesisu iqinisekiswe ngezinga elikhulu kunalokho ababekucabanga ekuqaleni. Kuliqiniso futhi lokhu kungaba ngumzila wokubanjwa kwaleli qembu labantu, kodwa kukhona okuthile okukhona phakathi kweqembu labantu elikhulayo. Kungakho manje kudingeka ukukhuthaza uhlelo lwentando yeningi ngqo phakathi kweqembu elikhulu labantu. Lokhu kudinga ukuthi wonke umuntu ofunda lokhu akopishe incwadi bese eyidlulisela, ngokwesibonelo, amakheli ayi-10 kumbuthano wakho oyinhloko nombuzo wokuthi ngabe nawo afuna ukuyidlulisela yini incwadi. Lapho lokhu kwenzeka kuba ukukhula okuqaphelekayo ekuqwashiseni ngoguquko / enye indlela efana nentando yeningi eqondile. Ukujwayelana nakho kuyisinyathelo sokuqala esenzweni sabantu, njengoba kuzofakazelwa abathengisi abaningi.
Uyakhumbula, ukulangazelela ukubuyela kokujwayelekile kwakudala akufanele kusaba khona ngoba leso simiso sinikeze ithuba lokuqondisa umphakathi esimeni esikuso manje. Ngakho-ke ngicela ukhiphe lo mcabango engqondweni yakho. Ngakho-ke ukukhetha ukwamukela okujwayelekile okusha manje esingahlangana ngakho nokufunda ngocingo noma ukwamukela enye indlela futhi kube inombolo yomdanso 5, 15, 500, 50000 noma 1 million "wokwenza ukunyakaza".
Thatha isenzo esincane namuhla ubone ukuthi bangaki abantu ongafinyelela kubo. Kwenze isizukulwane esincane nezingane zabo ezizayo nabazukulu !!! Ngakho: https://www.fvvd.nl
20 May 2020 ku-14: 50
ff ukuze kucace
Ngubani osayina imithetho kanye Nezinqumo Zasebukhosini?
Iziphakamiso zomthetho ezemukelwe yiPhalamende kanye neNqubo YaseRoyal zisayinwa (zisayiniwe) yizona ezenziwa yiNkosi bese zinikezwa ngungqongqoshe noma unobhala wezwe. Ngemuva kwalokho ziqala ukusebenza. Isibonakaliso se-contra sikhombisa ukuthi akuyona iKosi kepha ungqongqoshe obhekele (kwezepolitiki) ophethe
UWilly tog ukwenzile lokho futhi…
20 May 2020 ku-18: 54
Ngqo, ukuthi bafake ngobuhlakani kakhulu kumthethosisekelo, belulekwe abafana abafanayo.
Bayadingana futhi basebenzisana, kepha abantu abavamile abayitshelwa leyo nto. banesibopho esiqinile esikhethekile.
Lapho enye ikhona, enye ikhona. Kuhle nokho njengenkosi ukungakhokhi izintela, ukubonga ngemali enkulu namandla, futhi nomsebenzi wakho owuthole njengefa. Akunasidingo sokufaka isicelo ukuze abantu abangabakhethi abangcono bangabi nethuba. Sigqugquzelwe futhi ukuthi sithathe izinqumo lapho abaqokiwe empeleni bengabenzeli bakhe, bazosebenza kuye. ubani olawula inkosi esimweni esinjalo? Kungakho kunabalandeli abaningi be-orange. Well kuyakhokhela ukuba fan fan. U-Orange wayevele eyiqembu lezepolitiki futhi abaqede nalo ngobuqili ukuze inkosi ingakhethi. Noma kunjalo? . Uhlelo lwe-Feudal ngekhulu lama-21. Susa. Sayina isicelo manje!
Usongo lwebhomu wabhala:
20 May 2020 ku-21: 05
Ngempela, lokhu kungaba yindlela esheshayo yokungenelela - inqobo nje uma kutholakala abasekeli abenele. Futhi ngicabanga ukuthi kuthatha okungaphezulu kwenhloso ebekiwe yesicelo.
Iqiniso ngukuthi nalokhu kuncike ekubukekeni kwesinqumo sokubambisana. Kunoma yikuphi, intando yeningi ihlala icindezela abambalwa abangatholi "indlela" yabo. Ngaphezu kwalokho, intando yeningi eqondile nayo iyingozi uma abezindaba bengathathi hlangothi. Futhi lokhu okwedlule akunjalo ngqo eNetherlands.
Umzekeliso wendlela izinto ezingahamba ngayo ungabonakala ochungechungeni lwesizini ethi "The Orville" 1 isiqephu 7. Ukuthi uchungechunge "lokusakazwa okukhulu" akusho ukuthi ngeke kuqukathe umyalezo olusizo…
Nami futhi, ngiyangabaza ukuthi umshini wamandla uzosebenzisana noma ngabe kuthathwe amavoti anele, kodwa amahle. Ukudutshulwa akulungile. Noma kunjalo, kuzwakala kuyinqaba ukusayina isicelo. Kusewumuzwa wokuthi uyabona ukuthi abantu banamandla phezu kwakho nokuthi akukho ongakwenza ngaphandle kwabo. Uma ukuvuma lokho, kungani abantu bezosabela esicelweni sakho… ..
20 May 2020 ku-22: 26
Isikhalazo asisiyo into edlula nje inhlolovo yokuthi bangaki abantu abazimisele ukuqala futhi bakhombise ukuzibophezela kwabo. Kwethulwa i-neiamdn kusuka kwezombusazwe zamanje, kodwa ngokusayina okwanele kuwuphawu lokuthi: “Manje sesiyahamba” sibheke e-oda lepolitiki lakhathesi.
Into yokuqala okufanele yenziwe, yebo, ukubukeza kabusha okulukhuni okushaya ngamandla kwalokho okuse -hubhu. Lokho kuyinkohliso ngoba uthatha umlutha wabantu ngasikhathi sinye, kepha manje noma kungenzeki futhi sizobona ukuthi bangaki abantu abazimisele ngempela ukuya ezansi ukuze bashintshe
Ungakuvimbela ukuthi kungahambi kahle. Isibonelo: ukugoma okuphoqelekile. Ake sithi iningi lifuna ukugoma okuphoqelekile ngoba lithonywe abezindaba futhi sebeze bakholelwa ukuthi kulungile. Lowo mthetho uphikisana nomthethosisekelo. Lowo mthetho-sisekelo unemithetho ethile eyisisekelo esekelwe kwinkululeko kanye nelungelo lokuzinqumela. Akufanele-ke (okwenzeka ngomthetho wamanje) uphasise imithetho eyehlisa noma izame ukuphambukisa umthethosisekelo (ngokusekelwe kulungelo lomuntu elisisekelo).
20 May 2020 ku-22: 44
Kulabo abafunda kanye futhi empeleni bafuna ushintsho ezinganeni zethu nasezinganeni zabo. Cishe ususayine isicelo, kodwa lokho akusho ukuthi wuguquko. Ngabe uzimisele ukwenza okuthile futhi hhayi nje ukwaba ama-athikili namavidiyo angaphezulu nje kokuqinisekisa kwento esele kwaziwa. Kungenzeka yini ukuthi unikeze "ukunyakaza" okuthile okungaphezulu, ngokwesibonelo, ukusetha ingxoxo yevidiyo lapho izinto zingaxoxwa khona lapho futhi, ngokwesibonelo, sihlukanisa imisebenzi ukwenza izinto ezizodala ushintsho lwangempela. Noma kukhona ezinye iziphakamiso zokufinyelela eqenjini lelitshe elikhudlwana. Kunabantu abaningi abanesibindi (kufaka phakathi uMartin) aboniswe kumavidiyo anamaqhinga wokuqamba izinto. Isikhathi sokuthi sizibuke kulabo bantu bese sithatha i-gauntlet. Bafanelwe ukusekelwa futhi lokho kudinga ukushiya isimo sengqondo. Ngakho-ke ngiphakamisa ukwenza ingxoxo yevidiyo, kepha imibuzo ye-z2:
* abazimisele ukubamba iqhaza
* kukhona nezinye iziphakamiso
sizofunda ukuthi ukusabela kuyini
20 May 2020 ku-23: 03
Ngiyethemba impela ukuthi abantu bazothatha isinyathelo. Ingxoxo yevidiyo ingaba nomthelela omncane, ngoba kufanele ube ku-inthanethi ngasikhathi sinye, kepha ungadala ukunyakaza ngokuma ngokwakho nokwenza izitatimende ezicacile. Ungayenza ividiyo bese uyithumela lapha. Futhi-ke asiphendukeli embuthanweni wezokuxhumana wombuso (obizwa nangokuthi 'troll Army'). Letha imibono futhi ikakhulukazi isenzo sokhonkolo.
Isiqalo esibalulekile kungaba uma abantu beqala ukwaba iwebhusayithi futhi bazame ukukholisa abanye.
21 May 2020 ku-09: 01
Umsindo omkhulu, asizona izitha zabantu njengoba zichazwe ngaphansi kokubusa kukaStalin.
“Singabantu” abantu. Ngakho-ke akufanele siye ku-gulag futhi singasabi ngakho, sikanye nabantu babantu
Okunye futhi okucolisisiwe kakhulu ukuthi ungumuntu ozonda umuntu uma ungafuni ukugqoka imaskhi, futhi ngaphansi kobuhlakani besitha sabantu, bacabange ngakho-ke ngaphansi kukaStalin futhi manje usezingeni lomhlaba. Ngiyethemba abantu bazoza nezinyathelo. Uzobenza ubhekane nabo ngakho-ke okokuqala phakamisa ukuqwashisa, imibukiso yabezindaba njll, unevoti lami
Umuntu owenza abantu bazi ukuthi akayisitha sabantu, kepha ungumngani wabantu, hhayi nge-Gulag
21 May 2020 ku-15: 05
Abanye babafundi banikela ngeziphakamiso zokufinyelela kuzithameli ezikhulu noma izibonelo zemisebenzi engaphindwa ukwandisa ababukeli. Futhi, ukwaba okutholwe ku-inthanethi akunagalelo ekufezeni inhloso yentando yeningi eqondile. Njengesibonelo, ngibhekisa kumasayithi engivame ukuwavakashela http://www.fvvd.nl Ingabe bakhona abaningi abenze lokhu? Kukhona abafundi abazibandakanya nemisebenzi engaphandle kwe-Intanethi ukukhuthaza ukuqwashisa ngomqondo wentando yeningi ngqo kanye nesiza esihambisana naso. Uma kunjalo, wabelane ngakho nabanye bangathatha izintambo. Ngiyabona ukuthi isibalo sabantu abasayine singu-1181 (sibonga kusengaphambili ngalesi senzo) futhi lokho kumele kukhuphuke kaningi. Njengoba ngike ngabhala phambilini, manje yisikhathi ngoba ukugcotshwa kontanga kuyehla. Abantu banemizwa yesisu futhi bafuna enye indlela. Ukhona yini umuntu ongakhumbula izisulu zikaLance Armstrong? I-Zoiest iphinde yabanjwa kaningi kakhulu kunokuba bekucatshangwa ngaphambili. Okumnandi futhi kungaba yisiphakamiso, kepha ngineqiniso lokuthi phakathi kwabantu abayi-1100 abasayine kukhona imibono engcono kakhulu. Abanye mabayizwe.
21 May 2020 ku-15: 06
Uyazi ukuthi kwenzekeni ku-al-Qadhafi? Setha imali yakho futhi okuyiwona kuphela afinyelelwayo angabantu abanomqondo ofanayo, ukukholisa abantu ukuthi babanikeze umhlaba oqinile ngokumemezela ukuthi indlu abahlala kuyo ingempahla yabo. Iba yi-FB futhi kufanele kube khona, impumelelo kanye nenkampani.
« Ukuhlangana kweZindaba Zikahulumeni uJordie Zwarts kwehle ngamathani, kepha akukho okuzuzayo
Ingabe ukuqina kukaTrump ngokubhekelela eChina kungukuqala kokuwa kwedola nokuwa komnotho? »
Ukuvakasha okuphelele: 2.514.384